ဒေါင်းလုပ် Device ကိုအင်ဖို APK ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အသုံးအဆောင်များ Apps ကပ » device အချက်အလက်များ: ဟာ့ဒ်ဝဲ & Software များ [အခမဲ့, အဘယ်သူမျှမကြော်ငြာ]
device အချက်အလက်များ: ဟာ့ဒ်ဝဲ & Software များ [အခမဲ့, အဘယ်သူမျှမကြော်ငြာ] APK ကို
Device ကိုအင်ဖိုသင်တို့တွင်အသေးစိတျကိုပေးတော်မူ၏ hardware & Software များ configurations သင့်ရဲ့ Android device.This အသေးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များ၏သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည် CPU, RAM, သိုလှောင်ရေး, OS အာရုံခံ, Core, Partition ခွဲ, ဘက်ထရီ, ဒေတာများကွန်ယက်, Wi-Fi, SIM ကဒ်, ကင်မရာ, Bluetooth Display ကို, ထောက်ပံ့ features တွေ, ထုတ်လုပ်သူ, Apps ကပ, System ကို Apps ကပထည့်သွင်းခဲ့သည်။
ဖြန့်ချိ 3.0 သင်သည်သင်၏ကွန်ယက်စစ်ဆင်ရေးပရို & RAM ကိုအသုံးပြုမှု၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှလှုပ်ရှားမှုစောင့်ကြည့်ကြကုန်အံ့သမျှသောအသစ်သောပြုပြင်မွမ်းမံဒိုင်ခွက် Wi-Fi, Bluetooth နှင့်တည်နေရာ setting များကိုလက်ရှိပြည်နယ်ပါဝင်သည်။
Device ကိုအင်ဖိုအဖြစ်ကိုအောက်တွင်အုပ်စုဖွဲ့ထားတဲ့သင့်ရဲ့ Android device ကို၏အောက်ပါအချက်အလက်များကိုပေးပါသည်။
အန်းဒရွိုက် ID ကို
boot Loader ကို
Operating System ကိုအင်ဖို
ID ကို Build
sensor သတင်းအချက်အလက် (Accelerometer, ဂိုင်ရိုစကုပ်, pedometer, သံလိုက်စက်ကွင်းတိုင်းကိရိယာ, အဆင့် detector, ဆွဲငင်အား Motion,, လှည့်, စောင်း, လက်ဟန်, Wakeup)
တစ်ခုချင်းစီကိုအာရုံခံကိရိယာနှင့် ပတ်သက်. ရရှိနိုင်သောသတင်းအချက်အလက်:
sensor ID ကို
က Dynamic အာရုံခံင်သို့မဟုတ်မပါလျှင်
က WakeUpSensor င်သို့မဟုတ်မပါလျှင်
CPU ကို & ပရိုအသေးစိတ်
RAM ကို (Total, အသုံးပြုနဲ့မလှုပ်မရှား)
CPU ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရေး, အပိုင်း, တည်းဖြတ်မူ
ဘက်ထရီအမျိုးအစား (Li-Poly, Li-ion, နီကယ်-အပါအဝင်မြေ)
ဘက်ထရီအပူချိန်, ဗို့အား, Scale ကို, ကနျြးမာရေး
connection အမျိုးအစား (ဝိုင်ဖိုင်, မိုဘိုင်းဒေတာ)
integrated circuit ကိုကဒ်အမှတ်အသား (ICCID)
Service Provider / အော်ပရေတာ (SPN)
မိုဘိုင်းကွန်ယက် Code ကို (MNC)
ပြည်နယ် (မရရှိနိုင်, အဆငျသငျ့မ)
ရရှိနိုင်ထစ်အငေါ့ mode (မြန်, HighQuality)
ရရှိနိုင် Antibanding Mode
Flash ကို (ရရှိနိုင်နှစ်ချက်, အော်တို)
မြင်ကွင်းတစ်ခု mode (HDR, Portrait, ည, ပါတီ, နှင်း, အားကစားစသည်တို့)
format (JPEG, PNG)
ရုပ်ပုံ, အသံ & ဗီဒီယိုဖိုင်တွေအရေအတွက်
စုစုပေါင်း APK ကိုရဲ့ရရှိနိုင်သိုလှောင်မှုအတွက်
ဒေသခံ contents တွေကိုစူးစမ်းလေ့လာမှ file manager
scan Mode ကို
/ ဘလူးတုသ်ကိုချွတ်အပေါ် Turn
မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရွယ်အစား, ပုံမှန်အရှေ့တိုင်းဆန်, အကျယ်, အရပ်, Refresh Rate ကို, နာမည်
Display ကိုရေပုံး, display ကို dpi, PPI, သတင်းအချက်အလက်, ယုတ္တိသိပ်သည်းဆ, ခဲ့သည်ဆို၏သိပ်သည်းဆ
အသုံးဝင်သောအကျယ်, အသုံးဝင်သောအမြင့်, Density လွတ်လပ်သောအကျယ်, Density လွတ်လပ်သောအမြင့်
အသံအနိမျ့ - latency
App ကို Widgets
SIP- အခြေစိုက် VOIP
multi Touch ကိုစမ်းသပ်ခြင်း (ပေါင်းစုံထိတွေ့သင့်ရဲ့ device အတွက်ပံ့ပိုးမည်မျှစုံစမ်း)
အရောင်စမ်းသပ်ခြင်း (Screen ကိုအရောင်စမ်းသပ်မှု)
GPU ကို & RAM ကို
ဂရပ်ဖစ် Device ကိုအမည်
ဂရပ်ဖစ် Device ကိုရောင်းသူ
ဂရပ်ဖစ် Device ကိုဗားရှင်း
ဂရပ်ဖစ် Device ကို Extensions
မက်စ် Testure Size ကို
ဒီ app များကဲ့သို့သတင်းအချက်အလက်များအများစုဖုံးလွှမ်း
Processor ကို CPU, RAM, သိုလှောင်ရေး, ကင်မရာ, ဘက်ထရီ, ကွန်ယက်, Wi-Fi, SIM ကဒ်, Bluetooth Display ကို, မျက်နှာပြင် resolution ကို, GPS, NFC, USB မှတ်, အာရုံခံ, မိုက်ကရိုဖုန်း, Root, Bootloader, CDMA, GSM, လက်ဗွေ, VOIP, အသံ & ဗီဒီယို အချက်အလက်, ကင်မရာရှုခင်း mode, ကင်မရာဘောင် & ဆုံးဖြတ်ချက်, တိမ်းညွတ်, Bloatware, ပုံမှန် app တွေ, System ကို app ကိုအသုံးပြုသူ installed apps များ, Mac ကိုလိပ်စာ, SSID သို့, Link ကိုအမြန်နှုန်း, အိုင်ပီလိပ်စာ, OTG device ကိုအချက်အလက်, ဘက်ထရီဗို့အား, ဘက်ထရီကျန်းမာရေး, ဘက်ထရီအမျိုးအစားကိုထောကျပံ့ OS ဗားရှင်း, ဘုတ်အဖွဲ့, ထုတ်လုပ်သူ, မော်ဒယ် number ကို
device ကိုအင်ဖို Kotlin နှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ကို အသုံးပြု. တည်ဆောက်ထားလျက်ရှိသည်☞ https://github.com/QuixomTech/DeviceInfo
device အချက်အလက်များ: ဟာ့ဒ်ဝဲ & Software များ [အခမဲ့, အဘယ်သူမျှမကြော်ငြာ]
3.32 ကို MB
သင့်ရဲ့ Android ကိုစမ်းသပ်ရန် ...
sensors Toolbox ကို